Sunday May 31, 2020 - 12:13:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Shaqaalaha Hay'adaha samafalka ee Qaramada midoobe (United Nation Aid workers) ayaa kufsi u geeystay dad gaaraya 60.000 oo qofood oo iskugu jira caruur iyo dumar. Waxaana sido kale la sheegay in shaqaalahaas ay kamidyihiin 3,300 (Peedophiles) ragga jecel caruurta yaryar in ay u galmoodaan.
Warbixintaa ayaa lagu daabacay wargeeyska (The sun) ee kaso baxa cariga boqortooyada ingriiska. Gabood faladaan kufsiga ayaa la geeystay sanadihii oo ku dambeey. Haddii aan dib u jileecno tariikhda, xilligee ka dhaceeyn musiboyiinka Haiti. Masiibooyinkaa ayaa galaaftay nolosha 220,000, waxaana ku dhaawacmay 300,000, waxaana ku gurya waaye 1.5milyan oo qof.
Ayada oo ay kajiraan xaladahaas adag Haiti, ayaa waxaa la shaaciyay in shaqaala badan oo katirsan Hay'adaha qaramada midoobe ay halkaa ka geeysteen gabood fallo dhanka jinsiga ah, warbixinadaas ayaa lagu cadeeye shaqaalaha qaramada midoobe inay u kireeysnaayeen gurya jirka lagu iibiyo oo loogu magac daray ''Pink partment'' dadka inta badan halkaa jirkooda lagu iibinaaye ayaa ahaa caruur da'dooda uu dhaxeeysay 12-16 jir. Xilliga waxaa la xaqiijiyay 123 fal-dambiyeed dhanka jinsiga ah in lagula kacay caruur yar iyo dumar, muddo dhan 9 sano gudaheeda. Balse arinku intaa waa ka weeynyahay. https://www.thesun.co.uk/.../oxfam-haiti-sex-scandal-allegat.../.
Haddi aan u so laabano hordhaceeyni hore ee qoralka, Professor Macleod ayaa ku qiyaasay in ay ka shaqeeyaan kudhawaad 3,300 ragga caruurta yaryar uu galmooda (Peadophiles) Hay'daha samafalada (Non-govermental organisations) ee hoos taga Qaramada midoobe. Wuxuu intaa warka ku daray in kumanaan shaqsiyaadka jecel kufsiga iyo waxyeeleeynta dumarka iyo carurta ay shaqa uraadsadaan sannad walba hay'adahaas.
Aqoonyahan lagu kalsoonyahay ayaa yiiri :'' Waxaa jiro tooban kun shaqaalo (Peadophiles) ah oo ka shaqeeyo hay'adaha samfalka ee kuleh xarumaha dalal badan oo dunida kuyaala. Lakin haddi aad xerantahay dharka UNICEF wey adagtahay in lakaaga shakiyo ama lagu weeydiyo cida aad tahay. Waxaad sameeyn kartaa waxaad rabto, adiga oo adeegsanaaya magaca Hay'dahas.
Professor Macleod, ayaa ahaa xubin weeyn oo katirsan (United nation), Wuxuuna kaso shaqeeye Balkan, Rwanda iyo Pakistan, halkaa uu ka ahaa sargaal sare oo u qaabilsan Qaramada midoobe arimaha degdega (Emergency).
Dalka Ingiriiska (Great Britain) ayaa ah dalalka dhaqaalaha oo ku badan ku bixiyo ciidamada iyo hay'adaha qaramada midoobe ee ku sugan dalal badan oo dunida katirsan, waxayna ku bixiyaan dhaqaalo gaaraya £2bn sannadkii. Prof Macleod oo arintaa dhaleceeynaya ayaa yiiri :'' Waxaa xaqiiqda kafogeeyn in ingriiska uu ku bixiyo lacag aad uu xoog badan kufsiga ay uu geeysanayaan carrurta.
shaqaalaha Qaramada midoobe ee ku sugan dalal badan ayago wato shaati gargaar. Wuxuu intaa ku daray :'' Waan garan karaa in arintaan dooda badan ay dhalisay oo ay ka doodeen mamulka sare ee qaramada midoobe (United Nation), balse waxba kama so bixin oo la taaban karo, mar walba waxaa dhacda in shaqada laga eryo shaqaalaha arinta ka dhiidhiyo, ayaga oo diidaya kufsiga iyo gabood fallada ka dhanka ah bini'adamnimada ay geeysanayaan shaqaalaha Qaramada midoobe.
Isha qoraalka: Social Media